पाकिस्तानसँग हारपछि भारतीय टोलीमा देखाएका पाँच दुविधा | Hamro Khelkud
एजेन्सी – भारत आइतबार आइसिसी टि२० विश्वकप २०२१ मा पहिलो खेलमै पाकिस्तानसँग १० विकेटले पराजित हुन पुग्यो । सुपर १२ को समूह बी मा रहेको भारत विश्वकप इतिहासमा पाकिस्तानसँग पहिलो पटक पराजित भएपछि चर्को आलोचना खेप्दै आएको छ । पाकिस्तानले १ सय ५२ रनको विजयी लक्ष्य १७.५ ओभरमा कुनै विकेट नगुमाइ पूरा गरेको थियो ।
उपाधिको दाबेदार भारतलाई सेमिफाइनल यात्रा बलियो बनाउन आइतबार न्युजिल्यान्डलाई हराउनै पर्ने हुन्छ । न्युजिल्यान्डसँग आइतबार पराजित भएमा भने भारत समूह चरणबाटै बाहिरिने समीकरण देखिन्छ । जसले गर्दा भारतलाई जित बाहेक अन्य विकल्प छैन । तर पाकिस्तानसँगको हारले भने भारतीय टोली भित्र थुप्रै दुविधा र समस्याहरु देखिएका छन् । टोली सन्तुलन र प्लेइङ ११ लाई लिएर आलोचना भइरहेको छ । पाकिस्तानसँग हारपछि भारतीय टोलीमा देखापरेका पाँच दुविधाहरु :
ईशान किशन भारतीय टोलीमा दायाँ हाते ब्याटरको स्थान लिन सक्छन् ?
पाकिस्तानविरुद्ध भारतको प्लेइङ ११ मा बायाँ हाते ब्याटरमा ऋषभ पन्त थिए । भारतीय टोलीमा शीर्ष ६ ब्याटरमा पन्त एक्लो बायाँ हाते ब्याटर थिए । अलराउन्डर रविन्द्र जडेजा अर्को बायाँ हाते खेलाडी हुन् । शीर्षक्रममा भारतको बायाँ हाते ब्याटर छैनन् । यसले शीर्षक्रममा बायाँ र दायाँ हाते ब्याटरको सन्तुलन मिलेको छैन ।
त्यसैले बायाँ हाते तीव्र गतिका बलर शाहिन शाह अफ्रिदी शीर्षक्रमको नायक बनेका थिए । ईशान किशन टि२० विशेष ब्याटर हुन् । आक्रामक ब्याटिङको क्षमता राख्छन् । केहि समय अघि आइपिएलमा मुम्बई इन्डियन्सबाट सनराइजर्स हैदराबादविरुद्ध ३२ बलमा ११ चौका र ४ छक्का सहित ८४ रनको इनिङ खेलेका थिए । वार्मअप खेलमा इंग्ल्यान्डविरुद्ध किशनले ४६ बलमा ७ चौका र ३ छक्का सहित ७० रनको इनिङ खेलेका थिए ।
किशन भारतीय ओडिआई र टि२० आईमा डेब्यूमै अर्धशतक प्रहार गर्ने खेलाडी समेत हुन् । उनको आगमनले ब्याटिङ सन्तुलन हुने देखिन्छ । त्यसको लागि भारतले रोहित शर्मा र लोकेश राहुल मध्य एकलाई बेन्च वा तल्लोक्रममा खेलाउनु पर्नेहुन्छ । तल्लोक्रममा हार्दिक पान्ड्याको स्थानमा मौका दिने भन्ने पनि छ । भारतीय टोलीमा किशन निकै आवश्यक देखिन्छन् । तर कसलाई बेन्चमा राख्ने भन्ने दुविधा छ ।
रोहित र राहुलको ओपनिङ साझेदारीमा ब्रेक
शिखर धवन भारतीय ओपनिङमा छैनन् । रोहित शर्मा र लोकेश राहुलले ओपनिङ गर्दै आएका छन् । शिखर कमजोर स्ट्राइकरेट र सुस्त खेल्ने शैलीको कारण नपरेका हुन् । यी दुबै ब्याटर सुरुवाती समय लिन चाहन्छन् । तेस्रो नम्बरका विराट कोहली पनि सुरुवाती समयनै लिएर खेल्ने गर्दछन् । शीर्षक्रमका तीन ब्याटरको खेल्ने शैली र क्लास एकै किसिमको छ यसले गर्दा भारतले पावरप्लेको भरपूर्ण फाइदा उठाउन सकेको छैन । त्यसको असर डेथ ओभरमा पनि देखिन्छ ।
यो अवस्थामा राहुललाई मध्यक्रम र ईशानलाई ओपनिङ गराउने हो कि भन्ने दुविधा भारतीय क्रिकेटमा यतिबेला छ । राहुल वर्तमान समयका उत्कृष्ट ब्याटर हुन् । उनले मध्यक्रममा राम्रो रेकर्ड पनि छ । चौथो नम्बरमा राहुलको औसत ८७ छ । राहुललाई चौथो नम्बरमा खेलाउँदा भारतको ब्याटिङ सन्तुलन हुनेछ । यसले हार्दिक पान्ड्यालाईको आत्माविश्वासलाई पनि सहयोग गर्नसक्छ । हार्दिक खराब लयमा छन् । राहुल चौथो नम्बरमा हुँदा ब्याटिङमा सन्तुलन देखिन्छ ।
हार्दिक विशेष फिनिसरको लागि योग्य छन् ?
हार्दिक पान्ड्या चोट, बलिङ गर्न नसक्नु र खराब लयले भारतलाई चिन्ता थपेको छ । यसले वर्तमान समयमा भारतीय टोलीमा हार्दिक विशेष फिनिसरको लागि योग्य छन् भन्ने प्रश्न पनि उठ्न थालेको छ । हार्दिक पछिल्लो समय केहि समय भारतीय टोलीमा पनि थिएनन् । आइपिएलमा यस सिजनमा हार्दिकले १२ खेलमा १४.११ ओ औसतमा कुल १ सय २७ रन बनाएका थिए । जसमा उनको स्ट्राइकरेट ११३.३९ रहँदा उच्च प्रदर्शन ४० रन अविजित थियो ।
तर हार्दिक बलिङ ४ ओभर गर्न सक्छन् वा सक्दैनन भन्ने दुविधा छ । पाकिस्तानसँगको खेलमा उनी फिल्डिङ गर्ननै आएका थिएनन् । अर्कोतर्फ हार्दिक बलिङ गर्न सक्दैनन् भने ब्याटिङको लागि मात्र त ईशान किशनलाई मौका दिएर हेर्ने हो कि भन्ने पनिछ । तर हार्दिकले बलिङ नगर्दा छैटौं बलरको विकल्प पनि हुँदैन । यसले गर्दा भारतीय क्रिकेट हार्दिकको स्थानमा धेरै दुविधामा छ ।
शार्दूल ठाकुर भारतीय टोलीमा अनौंठो भूमिका निर्वाह गर्नसक्छन् ?
तीव्र गतिका बलर शार्दूल ठाकुर वर्तमान समयका स्ट्रिम स्मार्ट बलर हुन् । हार्दिक पान्ड्याको विकल्प पहिलो रोजाईमा शार्दूलनै छन् । तर उनको आगमनले ब्याटिङ कमजोर हुने हो की भन्ने चिन्ता पनि छ । ठाकुरले १ सय २२ टि२० खेलमा १ सय ८३ रन बनाएका छन् । औसत ९.१५ र स्ट्राइकरेट ११५.०९ छ ।
तर अष्ट्रेलिया र इंग्ल्यान्ड भ्रमणमा उनी भारतका गेम चेन्जर खेलाडी हुन् । अष्ट्रेलियाविरुद्ध चौथो टेस्टमा भारतलाई सानदार जित दिलाउन ठाकुरले ६७ रनको इनिङ खेलेका थिए । इंग्ल्यान्डविरुद्ध ५७ रनको इनिङ खेलेका थिए । उनले ब्याटिङमा पनि पछिल्लो समय आफ्नो सम्भावना देखाएका छन् । आइपिएलमा चेन्नईलाई यस सिजनको उपाधि दिलाउन उनको प्रदर्शन उत्कृष्ट थिये । भारतले हार्दिक वा रविन्द्र जडेजा ठाउँमा जोखिम लिने की भन्ने दुविधा छ ।
के भारतको बलिङ आक्रामण सन्तुलन ठिक छ ?
भारतीय स्पिन आक्रमण बढी छ । भारतले आफ्नो प्लेइङ ११ मा तीन तीव्र गतिका बलरलाई मौका दिएको थियो । भुवनेश्वर कुमार, जस्प्रित बुमराह र मोहम्मद शामी तीव्र गतिका बलरको रुपमा थिए । स्पिनरमा जडेजा र वरुण चक्रवर्ती थिए । भुवनेश्वरको पछिल्लो लय राम्रो छैन । पाकिस्तानविरुद्ध ८.३० को औसतमा बलिङ गरेका थिए । यस सिजनको आइपिएलमा ११ खेलमा ६ विकेट लिएका थिए ।
स्पिनर बरुण चक्रवर्तीले सुरुवात दुई ओभरमा प्रभाव छाडेपनि मध्यक्रममा राम्रो गर्न सकेनन् । मध्यक्रम आक्रमण बलियो बनाउन रविचन्द्रन आश्विन चक्रवर्ती र जडेजा एकै साथ आउन सक्छन् ? जस्प्रित बुमराह र मोहम्मद शामीलाई शार्दूलले सहयोग गर्लान् भन्ने प्रश्न छ । कि अनुभवी बलर भुवनेश्वरकै साथ जाने भन्ने दुविधा छ ।